Soo bandhigiddan ayaa in ka badan 24,000 oo aragti ah ka qabatay Slideshare waxayna haysaa macluumaad aad u tiro badan… dhammaantoodna waxaa lagu soo koobay gabal dhacyo ka kooban 140 xaraf ama wax ka yar. Xitaa waxaad ka heli doontaa xoogaa qorayaasha ah Martech Zone gudaha, sidoo kale!
Kala duwanaanta iyo hodantinimada tilmaamahan ayaa markhaati dhab ah u ah awoodda Twitter-ka oo ah dhexdhexaad warbaahineed. Ha yareysan awoodda sheydaan. Waa tan soojeedinta - 140 Talooyin Twitter:
PS: Kyle runti ma uusan qorin boostadan, Doug ayaa qoray. Kyle waa nin mashquul badan laakiin Doug wuxuu rabay inuu hubiyo inuu helo dareenka uu uqalmo soo bandhigid weyn iyo buug cajiib ah.